Nokuqeqesha impumuzo kwemisipha
Ezemidlalo Ukufaneleka, Umzimba wokwakha
Relief kwemisipha nje ngeke kutholakale - ke kudinga indlela ekhethekile ukuqeqeshwa. Ngaphezu kwalokho, kudingeka uqonde ukuthi ukuqeqeshwa sezwe - a eziyinkimbinkimbi agcwele, okuyinto kufanele kuqashelwe sisonke, ngaphandle kokulahlekelwa noma iyiphi imininingwane. Ngakho sicela ufunde wonke amathiphu nokuyigcina unquestioningly ukufeza oluvelele impumuzo kwemisipha.
Ukuqeqesha amandla yisisekelo iqoqo yemisipha - ngaphandle zalezi umzimba, uyobe sifinyelele kwemisipha ukukhula lide kakhulu. Kodwa musa zokungajahi ukudalwa uhlelo lokuzivocavoca, njengoba lokhu kumele wasondela ngokucophelela. Uma usaqala, qala encane, futhi ngisho kangcono - sicela uxhumane ejimini instructor. Uzokutshela ngokuningiliziwe lokho umzimba kukhona ludingeka ekuthuthukisweni izinhlanga ezithile imisipha, indlela yokwakha kuze ijubane futhi sandise izindlela. Kodwa uma abawenzayo kakade ukuthi ukuqeqeshwa amandla phambi, futhi manje umgomo wakho - ukuqeqeshwa phezu sezwe, ungakha eyakho. Kubalulekile ukuthi ifake izivivinyo ezifana ebhentshini cindezela izinsimbi, push-ups, donsa-ups, donsa dumbbells, oqeda esifubeni. Lezi izivivinyo eziyisisekelo sawo esiningi Amazing ku sezwe ngendlela ezokwenza ukuthuthukisa ngangokunokwenzeka wonke amaqembu kwemisipha, kudingeka amadoda.
Kodwa akunakwenzeka ukuba afeze kuphela zonke ngesonto ukuqeqeshwa amandla , futhi bacabange ukuthi ukuqeqeshwa ngokuphelele isimo sezwe. Ukuze zithole imiphumela emihle, kubalulekile ukuba umsebenzi enye. Ngokwesibonelo, i-ukuqeqeshwa amandla, khetha izinsuku obungavamile ngesonto, okusho ngoMsombuluko, ngoLwesithathu nangoLwesihlanu, bese ngoLwezibili, ngoLwezine nangoMgqibelo enze umthwalo cardio. Zonke ezaziwayo sawo esiningi Uhlelo lokuqeqeshwa kwama impumuzo zihlanganisa kokubili amandla kanye nokuzivocavoca cardio, ngakho ningakwenqabi kubo. Ezinsukwini ezintathu ngesonto, ukuya gijima ihora - bese umphumela uyoba ngcono kakhulu, kanye umthwalo umzimba wakho ngokulinganayo basakaza, futhi ngesikhathi esifanayo ungathatha abo ukunakekela impilo yabo. Uma une ithuba, kanye ngesonto, awukwazi ukuya for a run, futhi pool - ukubhukuda futhi iwusizo kakhulu ngokuya ukuqeqeshwa kanye ngokuya impilo.
Uyini ukuqeqeshwa phezu sezwe?
Loluhlelo ngesineke, usukulungele ukuqala ukuqeqesha, kodwa ingabe abaqapheli ngokugcwele okushiwo lo msebenzi onjalo? Phela, ngaphambi kokuba udlulele kwelandelayo kulo mkhuba, kubalulekile ukuba zifunde theory kancane. A umbono uwukuthi ukudalwa impumuzo siqukethe izigaba ezimbili, okuyinto eduze kuyasebenzisana nomunye. Isigaba sokuqala - iqoqo ngqo yemisipha. Wenza ukuqeqeshwa amandla, yingakho imisipha yakho ezikhulayo, kodwa namanje hhayi okuchaza ngokucacile. Ukuze yemisipha isibe impumuzo, udinga iphendukele ekudleni, othiwa omiswe. essence yayo itholakala iqiniso ukuthi ukudla ephansi carb futhi kakhulu wamaprotheni amaningi imikhiqizo, ukunciphisa ukusetshenziswa kwamanzi futhi okuningi izithukuthuku. Ngenxa yalokho, imisipha yakho ziyahlangana - ngakho bodybuilders, okuyinto sibona kumabonakude, sifinyelele umphumela imisipha definition.
Ingase iphendule ngokungabi nasithakazelo nge barbell: amasu Ukuhola
Thrust block mpo: ezihlukahlukene futhi imishini umsebenzi
Alexandr Denisenko - umsubathi, oye wahola sawo esiningi kazwelonke
Smith imisipha Machine steel.
Viktor Simkin: Biography futhi ipumelelo bodybuilder
Ukwakha umzimba. omiswe umzimba
Njengoba ekhishwa izimbungulu ekhaya? iseluleko esihle
Rider Kris Frum: Biography
Bootmgr sishoda: yini okufanele uyenze? Indlela yokulungisa Bootmgr sishoda kwi-Windows 7 kanye ne-Windows XP
Kuyini emifuleni umehluko elisezansi entabeni? izici Comparative
Journey "Soviet-inkathi Park": Minsk
Sample imenyu sikashukela: imikhuba yokudla, ekudleni kanye nezincomo
Ngingalutholaphi kweqembu imidlalo inthanethi?
Pieria, iSan Panteleimon Beach Hotel 3 * - izithombe, amanani kanye nokubuyekezwa kwamahhotela
Filet mignon: kuyini nokuthi ukupheka
Ukuheha okudumile e Dzerzhinsk, Nizhny Novgorod Isifunda: incazelo, umlando kanye ezithakazelisayo amaqiniso
Indlela yokufunda i-IP nge-Skype: izindlela eziyisisekelo
Lolu ketshezi emaphashini: Izimbangela Nezingozi Ukwelashwa